बारले गर्‍यो प्रधानन्यायाधीशको बचाऊ, अनसन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह | CHALKHEL.COM
Home जीवनशैली/स्वास्थ्य बारले गर्‍यो प्रधानन्यायाधीशको बचाऊ, अनसन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह
काठमाडौं २९ पुस। कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गरेको छ ।
Previous articleजेफ बेजोस सबैभन्दा धनी , बिल गेट्स दोस्रो नम्बरमा
Next articleके फाइदा हुन्छ चाइनाको इन्टरनेट नेपालमा आउदा ? यो पढ्नुहोस !